Soo Dhaweyntii Maamulaha Minnewashta | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Soo dhawow! Himiladayadu waa inaan noqono dugsi meesha:
Qof kastaa wuu ixtiraamaa naftiisa iyo dadka kale
Qof walba wuu nabad qabaa oo baashaal
Qof kastaa wuxuu sameeyaa sida ugu fiican
Waxaan ku soo dhaweyneynaa xubnaha cusub jaaliyadeena waxaanan had iyo jeer raadineynaa jawaab celin sida aan ugu noqon karno meel wanaagsan caruurta.
Waxaan nahay bulshada waxbarta oo ka kooban qiyaastii 890 arday oo dhigta fasalada K-5. Waxaan ka mid nahay lixda dugsi hoose ee ku yaal Degmada Dugsiga Minnetonka. Minnewashta waa iskuulka ugu galbeedka badan degmada wuxuuna ku yaal xeebta koonfureed ee harada Minnetonka. Waxaan nahay iskuul xaafadeed kaas oo 100+ xubnood oo shaqaale gaar ah ay lashaqeeyaan u heellan iyo kaqeyb qaadashada bulshada waalidka si ay u siiyaan jawiga ugu wanaagsan ee waxbarasho ee ugu wanaagsan ee carruurta.
Xog ururintii ugu dambaysay ee waalidka, 94% qoysaskeenu waxay ku soo wargeliyaan maamulaha in la heli karo. Intaas waxaa sii dheer, 92% qoysaskeennu waxay soo sheegaan inay ogyihiin waxa carruurtoodu baranayaan. 65% qoysaskeenu waxay soo sheegaan inay hubiyaan Facebook maalin kasta. Sidaa darteed, Minnewashta waxay isticmaashaa bogga Facebook waxayna leedahay in ka badan 1,000 taageerayaal ah. Waxaan leenahay hadaf ah inaan dhajinno maalin dugsiyeed kasta. 90% qoysaskeenu waxay soo sheegaan inuu jiro waqti kufilan oo ay caruurtoodu ku kasban karaan saaxiibo inta lagu jiro maalinta iskuulka heerka fasalkooda. 95% waxay soo sheegaan manhajka inuu yahay mid dhib badan.
Ardaydeena waxay jecelyihiin imaatinka dugsiga waxayna si joogta ah waxqabadyo ugu sameeyaan heerar sare heerarka gobolka iyo kuwa qaranka labadaba.
Qiyaasta Horumarka Tacliinta
Waxaan u adeegsannaa Qiyaasaha NWEA ee Horumarka Tacliinta si aan u cabirno koritaanka ardayda deyrta illaa gu'ga sanad walba xagga akhriska iyo xisaabta. Waxay muujineysaa ardaydeena inay si isdaba joog ah u kasbadaan wax ka badan sannad koritaanka sannad gudihiis. Celcelis ahaan waxqabadka xisaabta guga kindergarten wuxuu dhigaa ardayda bartamaha fasalka 1aad iyo akhriska xanaanada waa bilowga fasalka 1aad iyadoo ardayda badankood gaarayaan bartilmaameedyadooda koritaanka sanadka.
Ardaydayada fasalka 1-aad waxay sameeyeen bilowga ilaa bartamaha fasalka 3-aad ee xisaabta, iyadoo 95.2% ay sameynayaan koboc la beegsanayo. Tani waa wax cajiib ah! Intaas waxaa sii dheer, akhrisku wuxuu ahaa dhexda ilaa dhamaadka fasalka 2aad.
Fasalka 2aad, ardaydu waxay sameeyeen bartamaha fasalka 3-aad ee xisaabta. Akhrinta waxay gaareen bartamaha ilaa dhamaadka fasalka 3aad iyadoo in kabadan 75% ardayda sameynayaan kobcin la beegsanayo labada aag.
Ardayda fasalka 3-aad waxay gaareen bilowga ilaa bartamaha fasalka 5-aad ee xisaabta iyo akhriska.
Fasalka 4-aad waa marka ay ardaydu runtii bilaabaan inay dardargeliyaan waxbarashadooda! Ardaydayada fasalka 4-aad waxay kasbadeen laba heer-fasal – iyagoo kuqiyaasaya bilowga fasalka 6-aad ee xisaabta iyo bartamaha fasalka 6-aad ee akhriska.
Iyaga oo aasaas adag leh gadaashooda, ardayda dhigata fasalka 5-aad ayaa si buuxda uga gudbay barashadii una akhriyay akhris si ay wax u bartaan. Ardayda fasalka 5aad waxay soo dhejiyeen dhibco akhris oo u dhiganta dhammaadka fasalka 9aad! Waxqabadka xisaabta ayaa xitaa ka sii xoog badneyd markii ardaydu ay kor u kaceen bilowga waxqabadka fasalka 11aad iyada oo 81.1% ay ardaydu sameynayaan koboca ay bartilmaameedsanayaan. Cajiib! Taasi waa guul la taaban karo oo xaqiijineysa inay si wanaagsan ugu diyaar garoobeen dugsiga dhexe iyo wixii ka dambeeya.
Marka lagu daro bixinta waxbarashada aasaasiga ah ee lagu barto Ingiriisiga, qoysaska ku nool Minnewashta waxay ikhtiyaar u leeyihiin inay iska diiwaangeliyaan barnaamijka Barashada Luqadda Isbaanishka oo ka bilaabanaya xanaanada. Ardaydu waxay geli karaan oo keliya barnaamijka quusin ee xanaanada, ilaa ay muujiyaan heerka ku habboon ee luuqada Isbaanishka inay ku galaan fasal dambe. Qoysaska doorta ikhtiyaarka quusin ayaa la weydiisanayaa inay sameeyaan ballan-qaad lix sano ah barnaamijka. Ardaydeena Isbaanishka ee fasalka 3aad ilaa 5aad waxay kaqeybqaataan xogta NWEA ee kor ku xusan ardayda K-5 Isbaanishka waxay kujiraan xogta xisaabta. Qiyaastii Isbaanishka ardaydeena fasalka 5-aad waxay sanadkan uga soo baxeen heer fasal faham oo u dhigma bartamaha fasalka 7-aad. Marka, waxay horumar ballaaran ku sameynayaan luuqadda la bartilmaameedsaday sidoo kale. Waxaan haynaa barnaamij si wanaagsan loo aasaasay oo ka mid ah fasalkeenna koowaad ee fasalka 9aad ee dhammaystiray barnaamijkeenna oo iska diiwaangeliyey AP Spanish, 100% waxay ku dhaliyeen seddex ama wax ka badan imtixaanka Meelaynta Sare ee 2016-ka ee ardayda cusub!
Khaas ah maalin walba la bixiyo
Marka lagu daro tacliinta aasaasiga ah, waxaan nasiib u helnay inaan shaqaaleyno khabiiro ku takhasusay waxbarashada jirdhiska, muusigga, kooxda muusiga, kooxda muusiga, fanka iyo warbaahinta / akhrinta iyo akhbaarta. Dhammaan ardayda waxay la shaqeeyaan khubarada ku-meertada shan maalmood ah.
Iyada oo loo marayo Waaxdeenna Waxbarshada Jirka, ardaydu waxay ku bartaan mabaadi'da jimicsiga jir ahaaneed ee qofka. horumariyo xirfadaha mootooyinka waaweyn iyo kuwa yaryar, iyo sidoo kale istaraatiijiyado iyo fikrado si guul loogu gaaro koox ama goob-labo-qaybgalayaal. Ardaydu waxay kaqaybqaataan fasaloda jimicsiga jimicsiga rukhsad ruqsad haysta 100 daqiiqo shantii maalmoodba.
K-2 waxaan si gaar ah uga caawinnaa ardayda horumarinta fikradaha iyo xirfadaha:
Hanuuninta iyo boos shaqsiyeed
Meel guud iyo dhaqdhaqaaqyo hal abuur leh
Xirfadaha tareenka, heerarka, iyo tilmaamaha
Dariiqyada iyo jidadka dhaq dhaqaaqyada hal abuurka leh
Fikradaha dhaqdhaqaaqa iyadoo la adeegsanayo buunbuunin
Maareynta jirka iyo isu dheelitirka
Wadajirka iyo wada socoshada iyo iskuxirka fikradaha dhaqdhaqaaqa
Baacsiga iyo cararidda
Ka qaybgalida ardayda bilowga jimicsiga jirka
Caqabadaha jirdhiska iyo wareegyada
Taam ahaanshaha kooxda
Caqabadaha khariidadaha iyo kooxaha dhaqdhaqaaqa
Socodka, orodka iyo orodka
Basketball, kubada cagta, xeegada, kubada cagta, kubbadda jilicsan, kubbadda laliska
Tuurista iyo qabashada
Racquets iyo Paddles
Aqoonso astaamaha muusigga oo ay ka mid yihiin laxanka, laxanka, iswaafajinta, dhaqdhaqaaqa, midabka midabka, qaabka, qaabka iyo fikradaha la xiriira
Akhriso oo ogeysiiso muusikada adoo adeegsanaya nidaam qoraal ah, sida solfege, nambarro ama astaamo
Ku hees kuna ciyaar si sax ah, laxan, iyo ujeedo qeexan
Aqoonso astaamaha muusikada dhaqammada kala duwan.
Fasalka 4aad, ardaydu waxay dooran karaan inay ku biiraan kooxda muusikada (iyagoo garaacaya violin, viola, cello ama bass) marka lagu daro kaqeybgalka muusikada fasalka. Fasalka 5aad, ardaydu waxay dooran karaan inay ku takhasusaan heesaha, kooxda muusikada, ama kooxda muusikada ama sii wadaan muusikada fasalka.
Arday kasta wuxuu dhigtaa fasal 50-daqiiqo ah oo farshaxanka ah shantii maalmoodba mar oo uu la joogo khubaradayada farshaxanka. Habkayaga heer dugsi hoose waa qaab farshaxan ku saleysan edbinta (DBAE) oo leh qaab farshaxaneed, dhaleeceyn farshaxan, soo saar farshaxan, iyo bilic. Qeyb kasta oo farshaxan ah waxay leedahay ama farshaxan farshaxan ama ujeedo dhaqan.
Ku soo dhowow Minnewashta! Waxaan rajeynayaa inaan lashaqeeyo qoyskaaga si aan ugu dhiirrigeliyo xiisaha iyo jacaylka barashada ilmahaaga.
Cindy Andress, Maamulaha